What isa‘Water Festival’
A Burmese Traditional Novitation ceremony (Shin byu ah-hlu)
ငါ့ဆီကို ရင့်ကျက်မှုတွေ ယူလာပေးပါ။
ပြုံးနေကျ အပြုံးတို့က ဆွံ့အ
နိုးထခဲ့တဲ့ ငါ့ မနက်ဖြန်တွေက
အတွေးတွေအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါ့ပူလောင်ခြင်းတွေ
ဦးတည်ရာမဲ့စွာ ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်တေလေ တစ်ကောင်သာ။
၁၂ ဇွန် ၂၀၁၆
(၁၃း၁၅ နေ့လည်)
This entry was posted on June 12, 2017, in Poems.	Leaveacomment
အရင်က အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်တူးဆွနေတဲ့ ဒီမိုးစက်တွေရယ်၊
ဟိုးတုန်းကထက် အနည်းငယ်အရောင်မှိန်နေတဲ့ဂစ်တာ တစ်လက်ရယ်လည်းရှိတယ်။
မောပန်းနေတဲ့ ခြေအစုံကိုလည်းဖေးမ ဖို့လိုမယ်၊
သူတို့ပေးတဲ့ အဖိုးအခတွေက စေးကပ်လွန်းလှတယ်၊
This entry was posted on June 9, 2017, in Poems.	Leaveacomment
This entry was posted on June 8, 2017, in Others.	Leaveacomment
သော့သော့ အတွေး ခပ်ရေးရေးထင်
၂၆ မေလ ၂၀၁၇
၁၃း ၂၀ (နေ့လည်)
This entry was posted on May 26, 2017, in Poems.	Leaveacomment
ဒါပေမယ့် လူတွေက ပိုလို့ခက်ခဲတယ်။
This entry was posted on May 15, 2017, in Others.	Leaveacomment
အခက်အခဲဆိုတာတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ ခွန်အားတွေအဖြစ် သဘောထားပါ။
This entry was posted on May 11, 2017, in Others.	Leaveacomment
ခုတစ်လော ကြားရတဲ့သတင်းတွေက စိတ်မကောင်းစရာ။ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဇာတိက ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ တစ်ချို့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ မရှိကြတော့ဘူး။ မကြာသေးခင်ကပဲ သူတို့ကိုယ်တွေကို နှုတ်ဆက်လို့၊ တစ်ချို့လည်းနှုတ်မဆက်ပဲ လူ့လောကထဲကနေ ထွက်သွားကြတယ်တဲ့။ သတင်းကြားတော့၊ ဟောဗျာ။ ဟင်။ စုတ်တစ်သတ်သတ်နဲ့၊ စိတ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့။ ဪ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ။ မြန်လိုက်တာ။ အာမေဋိတ်တွေဖြစ်လို့။
ပြန်တွေးကြည့်တော့ သူတို့တွေထဲက (သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုး) တစ်ချို့တွေကတော့ အစားအသောက် အနေအထိုင်အပိုင်းမှာ ဖြစ်သလိုနေကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အလျောက် စားချိန်တန်စား အိပ်ချိန်တန်အိပ်ကြသူတွေ။ ကျန်းမာရေး အတော်အသင့်လိုက်စားကြသူတွေပါရဲ့။ ဆိုပေမယ့် အသက်ရှည်တယ် မရှည်ဘူး အာ မ မခံနိုင်ပြန်ဘူး။
ဒီဖက်ခေတ်ထဲလည်း ရောဂါသစ်တွေ ရှိလာတယ်ဆိုပေမယ့် နည်းပညာတွေက တိုးတက်နဲ့၊ ဆေးဝါးတွေလည်းအသစ်တွေနဲ့ပေါ့လေ။ သွေးပေါင်ချိန်တာတောင် အရင်ကလို ဆရာဝန်မလိုတော့ဘူး။ ဆေးရုံဆေးခန်းကြီးတွေထဲက တစ်ကိုယ်လုံးကို စကန်ဖတ်တဲ့ဟာကြီးထဲ ဝင်လိုက်ရင်ဖြင့် (အောင်းမျလေး) ဘယ်နေရာဘာဖြစ်တယ် တန်းသိဆိုပဲ။ ဗိုက်ထဲ မှန်ဘီလူးထည့်ကြည့်ရတာနဲ့။ အချိန်ဆွဲ ထားတဲ့ဆေးတွေနဲ့။ ဪ တယ်လည်း တိုးတက်ပါ့လားပေါ့။
ဆိုပေမယ့် အသက်တွေကတော့ ဆုံးရှုံးနေကြရဆဲပဲ။ ဒီလောကထဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမထောက်တာ အဲဒီသေချင်းတရားတစ်ခုတည်းကျန်တော့တာလား မသိပါဘူး။ အယုတ် အလတ် အမြတ် မရွေး။ ငါတော့ ငယ်ပါသေးတယ် ဆိုပြီး မာန်တက်နေလို့ မရတဲ့အရာ။ တရားကျတယ်ဆိုတာထက် အပြောင်းအလဲ တွေသိပ်မြန်တယ်ဆိုတာကို ပြောချင်တာပါ။ ထိန်းချုပ်ဖို့ မရတဲ့ အရာတွေ၊ ငွေနဲ့ လဲလို့ မရတဲ့ ဟာ တွေ အများကြီးပါလား ဆိုတာ နည်းနည်းသတိထားမိတာပါ။
မနက်ဖြန်နဲ့ နောက်ဘ၀ ဘယ်ဟာပိုနီး၊ နောက်ဘ၀ ပိုနီးဆိုသလိုပဲ။
သြော် မသေခင်တော့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေးတွေလုပ်ဦးမှ။ ပိုပြုံးဦးမှပါ။
၁၁ ဧပြီ ၂၀၁၇
This entry was posted on April 28, 2017, in Others.	Leaveacomment
Most of the time, things don’t go inaway they used to be.
Just do not mean too much. Takeadeep breath, close your eyes and plunge.
This entry was posted on April 27, 2017, in Others.	Leaveacomment
လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်လို့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ လူလို
အညာရဲ့ ယာခင်းက မှ သိပ်ပီပြင်လွန်းမယ်ထင်ရဲ့။
သဲခင်းတဲ့ ကွင်းပြင်မှာ ကျောက်စရစ်က ထက်ဝက်
တစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်တဲ့ လေဟာ လည်း ပူ
လူသူသိပ် မထူတဲ့ နေ့ခင်းမှာ ကောက်နှံပင်တွေက လှီလို့
တန်းစီ လို့ စိုက်ထားတဲ့ ထန်းပန်နဲ့ ကန်သင်းကိုခြား
စည်းဝါးမညီတဲ့တိုင်ပင်နဲ့ သီချင်းကြီးတစ်ပုဒ် ညည်းနေလေရဲ့။
သဲခင်းတဲ့ ချောင်းခြောက်ရဲ့ လက်ယက်ရေတွင်းတွေနံဘေး
ထန်းသား နဲ့သာ ခင်းတဲ့
ခမ်းနားခြင်းမရှိလှတဲ့ ရေချမ်းစင် သေးသေးလေးတွေက
ဒီနား လည်း ငုတ်တုတ်
ရေဆိုတာ ရဲ့ အရသာ
အဟုတ်တကယ် သိပ်ချိုတဲ့ အညာ။
နံ့သာဖြူနဲ့ သနပ်ခါးတွေ ဒင်းကျန်းပေါတဲ့ အညာ။
သနပ်ခါး ဘေးကြား ဆွဲရင်း
နွားညီနောက်စုံတွဲနဲ့ ယာတော ၀င်သူက၀င်
အိမ်ကခွေးကို သယ် လွယ်လို့သာ လောက်လေးအိတ်နဲ့
သူ့အထား နဲ့သူသာ အသက်ဝင်နေတတ်ရဲ့။
တမာခတ် ငပိရည် နဲ့
စားမြိန်စေအောင် ပတက်ကို ကြော်
ရာသီပေါ်ထန်းသီးနု ဆီပြန် ကုကွှိုရွှက်သုတ်နဲ့
နှမ်းပြစ် နဲ့ ပဲပြစ် စားရင်းက
ညနေဖက်များ နေ ညိုရင်တော့
၀ါသနာ ပါတဲ့ အကိုတွေက
တစ်ကုတ်ကုတ် နဲ့ တစ်ခွက်တစ်ဖလား
မြို့ပြရဲ့ ညတွေလို မီးရောင်စုံတွေ နဲ့ စည်ကားနေခြင်းတော့ မဟုတ်။
လုပ်စရာ ကိုင်စရာ ကတော့
အိမ်တွင်းပု့း ရှိရာမှာ ဖိုသံပေးလို့
လူပျို ပိုးကြသူက ပိုး၊
ရေဒီယို ဖွင့်သူက ဖွင့်
ဗီဒီရိုရုံ သွားသူက သွားနဲ့
တစ်နေတာရဲ့ မောပန်းခြင်းကို အပျော်ရှာ
ချို့တဲ့ သည်ပဲ မြင်မြင်
ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်ရွာမှာပဲ ပျော်မွေ့ကြသူတွေသာ။
ဟိုခပ်လှမ်းလှမ်းက တမာပင်တန်းတွေ ရှိရာ
နံ့သာရောင်သမ်းတဲ့ ထနောင်းတန်းတွေ ပေါက်ရာမှာ
ရိုးရာအစာ ဖြစ်တဲ့ ထန်းရည်နဲ့ ကြွက်ကြော်
ပဲလှော် နဲ့ မြည်းကာ သွားသောက်ရအောင်လို့
၂၆ ဧပြီ ၂၀၁၇
This entry was posted on April 26, 2017, in Poems.	1 Comment
ငွေနဲ့ခြားခံရတဲ့ ဘ၀တွေ ရှေ့ လျှောက် မပိုင်ဆိုင်ရပါလို၏။
ဟုတ်တယ်လေ လိုင်းသုံးနေတုန်း ဘေလ်ကုန်သွားတော့ ဘာမှ တက်မလာတော့ဘူး။
This entry was posted on April 26, 2017, in Others.	Leaveacomment
Categories Select Category Articles (6) Jokes (1) Others (21) Poems (21)
Recent Posts: Summerleaves
*************************************************************** တိတ်ဆ်ိတ်မှုတွေတိုးသိပ်နေတဲ့ အခန်းထဲ ပြုံးနေကျ အပြုံးတို့က ဆွံ့အ ဒဏ်ရာတွေက လျံကျ၊ နိုးထခဲ့တဲ့ ငါ့ မနက်ဖြန်တွေက တိတ်တဆိတ် အဖတ်ဆည်မရ ကြွေကျ။ အတတွေဗရပွက တွန်းထိုး ရိုးသားခြင်းတွေလား၊ အချင်းများခြင်းတွေလား ဝေခွဲမရ အကျည်းတန်စွာ ညဟာ အဖတ်ဆည် မရ အမှောင်ကျ။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဝေး အတွေးတွေအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ငါ့ပူလောင်ခြင်းတွေ မိုးနဲ့ အတူမျောလိုက်တယ်။ အခုတော့ င့ါသူရဲကောင်းဆိုတာ ဟိုး ကောင်းကင်ထက်က ဦးတည်ရာမဲ့စွာ ပျံသန်းနေတဲ့ ငှက်တေလေ တစ်ကောင်သာ။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၆ (၁၃း၁၅ နေ့လည်)
****************************************************************** အနားမှာ ကော်ဖီတစ်ခွက်ရှိတယ်။ တစ်မြည့်မြည့်ကျွမ်းလောင်နေတဲ့ စီးကရက်တစ်ဝက်ရှိတယ်။ သူ့တို့အားကိုးနဲ့ ခြေရာထပ်နေတဲ့ လမ်းကျဉ်းထဲငါ ဆက်လျှောက်နေဆဲပဲ။ အတိတ်တွေကိုသတိရစေတဲ့ သီချင်းဟောင်းတွေရယ်၊ အရင်က အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်တူးဆွနေတဲ့ ဒီမိုးစက်တွေရယ်၊ ဟိုးတုန်းကထက် အနည်းငယ်အရောင်မှိန်နေတဲ့ဂစ်တာ တစ်လက်ရယ်လည်းရှိတယ်။ အသားကျဖို့တော့ရုန်းကန်နေဆဲပဲ။ အိပ်မက်တွေရယ် အလွမ်းတွေရယ် ရံဖန်ရံခါ ၀မ်းနည်းခြင်းတွေရယ် သူတို့နဲ့ပတ်သက်မှုကို အဆုံးသတ်စေမယ့် ငါ့ရုံးထွက်မှုတွေရယ် ကတော့ အခုထိတိုင် အချင်းများနေတုန်းပဲ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ အထီးကျန်မှုတွေ ငါချစ်တတ်နေပီလား၊ ဝေးကွာခြင်းတွေကို နှစ်မြို့နေပီလား၊ အဲဒီ မေးခွန်းတွေလည်းရှိတယ်။ မသိသလိုချန်ထားခဲ့တယ်။ ဟုတ်တယ်၊ မနက်ဖြန်တွေကိုလည်းရေလောင်းရဦးမယ်၊ မောပန်းနေတဲ့ ခြေအစုံကိုလည်းဖေးမ ဖို့လိုမယ်၊ သူတို့ပေးတဲ့ အဖိုးအခတွေက စေးကပ်လွန်းလှတယ်၊ နောက်တစ်ရက် အိပ်ရေးထပ်ပျက်ဦးမယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး၊ အချိန်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလည်း လေးလွန်းလို့ပစ်ချထားခဲ့ပြီပဲ။ အခုတော့ အဲဒီကော်ဖီတစ်ခွက် ကုန်အောင်မသောက်ပဲ၊ အဲဒီဆေးလိပ်တစ်ဝက်ကိုမီးမသတ်ပဲ၊ ရောက်တတ်ရာရာရှိလို့နေတဲ့မီးခိုးငွေ့တွေကိုကြည့်ရင်း ငါ […]
အုံ့မှိုင်းဆွေဆွ မုန်တိုင်းလေလို နဂိုကနွမ်း မလန်းပန်းသို့ လင်းဖို့မသာ ထိုဝန်းကျင်မှာ ပဏာရွက်ကြွေ ညှိုးငယ်လေတော့ သော့သော့ အတွေး ခပ်ရေးရေးထင် ဘ၀င်မသာ စိတ်မှာတွေလို့ တံစို့ထက်ကင် သဲစိုင်နင့်အောင် ဘလောင်ဆူစွာ အကျွန့်ရင်ဝယ် မိုးရယ်အုံ့တိုင်း လွမ်းမိသည် သက်ထားဘယ်လို ရှိပါလိမ့်လေ။ ###################################### ၂၆ မေလ ၂၀၁၇ ၁၃း ၂၀ (နေ့လည်)
ဘ၀ဟာ ခက်ခဲတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတွေက ပိုလို့ခက်ခဲတယ်။
ခုတစ်လော ကြားရတဲ့သတင်းတွေက စိတ်မကောင်းစရာ။ အလုပ်ထဲက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ဇာတိက ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ၊ တစ်ချို့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေ မရှိကြတော့ဘူး။ မကြာသေးခင်ကပဲ သူတို့ကိုယ်တွေကို နှုတ်ဆက်လို့၊ တစ်ချို့လည်းနှုတ်မဆက်ပဲ လူ့လောကထဲကနေ ထွက်သွားကြတယ်တဲ့။ သတင်းကြားတော့၊ ဟောဗျာ။ ဟင်။ စုတ်တစ်သတ်သတ်နဲ့၊ စိတ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့။ ဪ ဖြစ်မှ ဖြစ်ရလေ။ မြန်လိုက်တာ။ အာမေဋိတ်တွေဖြစ်လို့။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ သူတို့တွေထဲက (သူငယ်ချင်း၊ ဆွေမျိုး) တစ်ချို့တွေကတော့ အစားအသောက် အနေအထိုင်အပိုင်းမှာ ဖြစ်သလိုနေကြပေမယ့် တစ်ချို့ကတော့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့အလျောက် စားချိန်တန်စား အိပ်ချိန်တန်အိပ်ကြသူတွေ။ ကျန်းမာရေး အတော်အသင့်လိုက်စားကြသူတွေပါရဲ့။ ဆိုပေမယ့် အသက်ရှည်တယ် မရှည်ဘူး အာ မ မခံနိုင်ပြန်ဘူး။ ဒီဖက်ခေတ်ထဲလည်း ရောဂါသစ်တွေ ရှိလာတယ်ဆိုပေမယ့် နည်းပညာတွေက တိုးတက်နဲ့၊ ဆေးဝါးတွေလည်းအသစ်တွေနဲ့ပေါ့လေ။ သွေးပေါင်ချိန်တာတောင် အရင်ကလို ဆရာဝန်မလိုတော့ဘူး။ ဆေးရုံဆေးခန်းကြီးတွေထဲက […]
Most of the time, things don’t go inaway they used to be. Just do not mean too much. Takeadeep breath, close your eyes and plunge. You will be fine.
တော အညာ ****************************************************** နေမင်းဟာ လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်လို့ အိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ လူလို ဘူတူတူ ထုံတုန်တုန် မှုန်သုန်တဲ့ မျက်နှာဘေးနဲ့ အညှိုးတေးထပ်လို့ သြော် ပူချက်ကွာ။ လွမ်းစရာမြင်ကွင်းဆိုတာ အညာရဲ့ ယာခင်းက မှ သိပ်ပီပြင်လွန်းမယ်ထင်ရဲ့။ သဲခင်းတဲ့ ကွင်းပြင်မှာ ကျောက်စရစ်က ထက်ဝက် တစ်ချက်တစ်ချက်တိုက်တဲ့ လေဟာ လည်း ပူ လူသူသိပ် မထူတဲ့ နေ့ခင်းမှာ ကောက်နှံပင်တွေက လှီလို့ တန်းစီ လို့ စိုက်ထားတဲ့ ထန်းပန်နဲ့ ကန်သင်းကိုခြား ဆိတ်ကျောင်းသားကတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ စည်းဝါးမညီတဲ့တိုင်ပင်နဲ့ သီချင်းကြီးတစ်ပုဒ် ညည်းနေလေရဲ့။ တမာသီးနံ့လည်း ရရဲ့ ထနောင်းပင်တန်းလည်းလှရဲ့ သဲခင်းတဲ့ ချောင်းခြောက်ရဲ့ လက်ယက်ရေတွင်းတွေနံဘေး တစ်ဟေးဟေး တစ်ပဲပဲနဲ့ […]
ဪ ငွေနဲ့ခြားခံရတဲ့ ဘ၀တွေ ရှေ့ လျှောက် မပိုင်ဆိုင်ရပါလို၏။ …. …. …. …. … …. …. …. …. … …. …. …. …. … ဟုတ်တယ်လေ လိုင်းသုံးနေတုန်း ဘေလ်ကုန်သွားတော့ ဘာမှ တက်မလာတော့ဘူး။ ဒီလောက်တော့ ဆုတောင်းပျစေ။
View Ko Gyi Kyaw’s profile on Facebook
View Ko Gyi Kyaw’s profile on Twitter
View kyaw_san_wai’s profile on Instagram
View Kyaw San Wai’s profile on LinkedIn
IC Show, in Myaw Sin Kyun, 2015 Waterfestival, Yangon
Monks reciting in the streets during water festival, 2015, Yangon
Night view, Strand Street, Sittwe
Mum and Daughter, Bandula park, Yangon
An child from an orphanage, Sittwe
Buddha, Eighty Thousands Pagoda, Mrauk U
Ninety Thousands Pagoda, Mrauk U
People dressed with formal traditional dresses and going around the roads to be seen by people during an ah-hlu
Boys and grils dressed likeaprincess andaprince post together with donar’, standing at both edges post foraphoto
A fisherman in Lay Myo river, on the way to chin villages